संक्रमितको अवस्था गम्भीर भए कति छन् देशभर आइसियु र भेन्टिलेटर? - Khabar Break | Khabar Break
संक्रमितको अवस्था गम्भीर भए कति छन् देशभर आइसियु र भेन्टिलेटर?
कोभिड रोकथाम तथा उपचार गर्न १८ फागुनमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले ८० दिन पार गरेको छ । त्यस्तै, ११ चैतमा सुरु भएको लकडाउनले पनि दुई महिना छुन खोज्दै छ। कोभिड बिरामीलाई बचाउने अन्तिम संसाधन भेन्टिलेटर हो, तर यसबीचमा देशभर जम्मा १५ भेन्टिलेटर थपिएका छन् । त्यसमा पनि १२ वटा अरू संस्थाले दिएका हुन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन्।
सरकारले कोभिड उपचारका लागि जम्मा तीन सय ९६ आइसियू र एक सय ५६ भेन्टिलेटर तयार पारेको छ । आइसियू र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि तीन सय ८५ स्वास्थ्यकर्मी तयार छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार निक साइमन फाउन्डेसनले १० वटा भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ भने वान हार्टनामक गैरसरकारी संस्थाले दुईवटा दिएको छ । यसबीचमा टेकु अस्पतालले तीनवटा भेन्टिलेटर खरिद गरेको हो।
निक साइमनले दिएका १० भेन्टिलेटरमध्ये दुईवटा बाग्लुङ, दुई बुटवल, दुई सुर्खेत, दुई धनगढी, एउटा वीरगन्ज र एउटा टेकु अस्पतालमा राखिएको छ । त्यस्तै वान हार्टले दिएको दुईमध्ये एउटा विराटनगर र एउटा बाग्लुङ पठाइएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि सात भेन्टिलेटर किन्ने तयारी गरेको छ । तर, अहिलेसम्म आइसकेका छैनन्। कान्ति बाल अस्पताल, वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका २६ भेन्टिलेटर बिग्रिएका छन् । कान्ति बाल अस्पतालमा १०, वीरमा आठ र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आठवटा भेन्टिलेटर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तर, यो महत्वपूर्ण चार महिना ती भेन्टिलेटर मर्मत गर्ने काम पनि भएको छैन।
कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा.कृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘बिग्रिएका १० भेन्टिलेटर मर्मत गर्न २० देखि २५ लाख रुपैयाँ लाग्छ । बीचमा महावीर पुनको टोलीले भेन्टिलेटर बनाउने चर्चा आएको थियो, तर त्यो काम अघि बढेन।’ शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा ६ र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका सातवटा भेन्टिलेटर मर्मत भएका छन् । हाल शिक्षणमा २० र ट्रमा सेन्टरमा १७ भेन्टिलेटर सञ्चालनमा छन् ।
निर्णय भएको पहिलो साता नै २० बेड आइसियू ल्याएको टेकु अस्पतालले अहिलेसम्म ती बेड सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नभएका कारण आइसियू जडानमा ढिलाइ भएको हो । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख रूपनारायण खतिवडा भन्छन्, ‘अक्सिजन प्लान्टको जडानले केही ढिला भएको हो, अब छिटै जडान गर्छौँ ।’ टेकु अस्पतालले ४० बेड आइसियू थप्ने जिम्मेवारी पाएको छ । त्यस्तै पाटन अस्पतालले भने नयाँ जडान गर्नुको विकल्पमा पुरानै र नचलेका आइसियूलाई कोभिड उपचारका लागि तयार पारेको छ । ‘सरकारले भनेअनुसार २१ बेड आइसियू तयार पारिएको छ,’ अस्पतालका निर्देशक डा। विष्णु शर्मा भन्छन् ।
यता वीर अस्पतालले भने आइसियू थप्न पाएको १२ करोड ५० लाखमध्ये एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन । वीरले दुई महिनासम्म खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छैन । अस्पतालका निर्देशक डा। केदारप्रसाद सेञ्चुरी भन्छन्, ‘अब चाँडै नै प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ अहिले कोभिडका बिरामीलाई उपचार गर्न देशभरि १६२४ आइसोलेसन बेड तयार छन्। त्यसैगरी ३९६ आइसियू र १५६ भेन्टिलेटर छन्। अहिलेसम्म ४२७ जना संक्रमित देखिएका छन्। जसमध्ये ४५ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्।